DOWLADA WADANKA YEMEN OO RAALI GALIN KA BIXISAY WEERARKA LAGU QAADAY SAFAARADDA MAREYNKANKA EE DALKAASI.
Madaxweynaha Wadanka Yemen Abdirabuh Mansur Hadi ayaa raali galin ka bixiyay Weerarkii lagu qaaday Safaaradda Mareynkanka ay ku leedahay Dalka Yemen.
Magaalada Sanca ay isugu soo baxeen Dadweyne careysan taasi oo keentay in Weerar ku qaadaan Safaaradda Mareynkanka ee Dalkaasi taasi ugu danbeyntii sababtay in calankii Mareynka dhulka soo dhigaan islamarkaana gubay taasi oo ka careysiisay Dowladda Wadanka Mareynkanka.
Madaxweynaha Yemen ayaa raali galin u diray dhigiisa Mareynkanka ee Obama,daqiiqado ka dib markii Banaanbaxayaasha Reer Yemen ay weerar ku qaadeen Safaaradda halkaasina dhagayo ku tuurayay ugu danbeyntiina hoos soo dhigay calankii Mareynka hadana gubay.
Inta uu socday Banaanbax ayaa Ciidamada Ammaanka Magaalada Sanca waxa ay fureen Rasaas taasi sababtay geerida Afar Ruux iyo dhaawaca tiri kale,
Madaxweynaha Yemen ayaa amray in baaritaanno la sameeyo si loog ogaado Cidda ka danbeysa dhacdadaan.
Dhanka kaleDibadbaxaal careysan oo
ka soo horjeedaAflagaadadii loo geystay NABI MUXAMED ayaa waxa ay
ku fideen Wadamo dhoor ah ooka mid ah bariga Dhexe iyo Waqooyiga
Africa . Isku dhacyo dhexmaray
Dibadbaxayaashaiyo Booliska Sanca ayaa waxaa ku dhintay 4 Qof Halka
34 kalane ku dhaawacmeensida ay sheegeen Saraakiisha Ammaankaee
Sanca . Sidoo kale Saraakiisha Ammaanka ayaa
sheegay in Booliska ay toogteenDad Dibadbaxyo ka sameynayeenAfaafka
hore ee Safaaradda Mareynkan ee ku taalaWadankaasi. Dhanka kale Dibadbaxayaashacareysan
ayaa waxa ay dhulka soo dhigeenCalanka Marenkaka dibna Dab
qabadsiiyeen, Booliska Yamen ayaa waxa ay is
ticmaalayeen gaaska ama suntan ka ilimeysiisaDadka dhigaya
Dibadbaxayaasha,sida uu sheegay Wasiirka arimaha Gudaha ee DalkaYemen . Aqriso oo la soco Risaala.net mar walba meel kasta oo aad joogto, si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey dal iyo dibad. Nagala soo xiriir: webmaster@risaala.net ama radiorisaala@hotmail.com
Daawo Sawirada isbedel laga dareemayo Magaalada Beladweyne